Vaovao amin'ny teny malagasy | United States Mission to Madagascar
> News in Malagasy
> Mety efa akaiky ny farany ho an’ny aretina tazomoka eto anivon-tanin’i Madagasikara
Vaovao amin'ny teny malagasy Mety efa akaiky ny farany ho an’ny aretina tazomoka eto anivon-tanin’i Madagasikara
Anjozorobe, Madagascar: Mety efa akaiky ny farany ho an’ny aretina tazomoka eto anivon-tanin’i Madagasikara, taorian’ireo taona maro niadiana tamin’ny aretina sy ny moka izay.
“Efa akaiky angamba ny farany ho an’ny aretina tazomoka aty amin’ity faritra ity,” hoy Ramatoa Barbara Hughes, Tale Jeneraly mpisolo toeran’ny USAID eto Madagasikara, raha nandray anjara tamin’ny famendrahana ody moka ny ati-trano hiarovana ny vahoaka amin’ny tazomoka izy. “Akaiky fongotra ny aretina tazomoka eto Madagasikara, hoy izy, indrindra aty amin’ny faritra anivon-tany.”
Efa ho efa-taona izao no miasa aty anivon-tany ny tarika nofanina sy vatsian’ny Sampan-draharaha Amerikana miasa ho an’ny Fampandrosoana na USAID vola, mamendraka ody moka ny ati-trano sy miaro ny vahoaka amin’ny aretina tazomoka. Ny moka dia tsy afa-mipetraka eny amin’ny rindrin-trano voafendraka ody moka ary tsy afaka manaikitra intsony, hany ka voasoroka ny fifindran’ny aretina.
Hetsika famendrahana ody moka any amin’ny trano miisa aman’hetsiny no vatsian’ny USAID amin’izao fotoana izao, miaraka amin’ny Fonds Mondial, ao anatin’ilay fandaharan’asa goavana antsoina hoe President’s Malaria Initiative. Ny Research Triangle International (RTI), mpiara-miombona antoka amin’ny USAID, no mpanatanteraka ny asa izay haharitra telo herinandro ao amin’ny distrikan’Anjozorobe. Vola mitentina 7,5 tapitrisa dolara no ampiasain’ny governemanta amerikana amin’ity hetsika 2011 ity izay mahakasika distrika 14, ka fito aty amin’ny faritra anivon-tany, ary fito any amin’ny faritra atsimo. Olona mahatratra ny 17.700 no hofanina any amin’ireo distrika 14 ireo hanazava ny fombafomba rehetra amin’ny olona ary hiditra any an-trano hanao ny famendrahana ody moka.
“Zava-dehibe amin’ny ady atao amin’ny tazomoka eto Madagasikara ny famendrahana ny ati-trano,” hoy ny fanazavana nomen’Atoa Sixte Zigirumugabe, tompon’andraikitry ny fandaharan’asa President’s Malaria Initiative (PMI) ao amin’ny USAID eto Madagasikara. “Fomba fisorohana tena mahomby izy io, ary efa nahitam-bokatsoa sy nanavotra ain’olona maro. Efa am-polo taonany no nampiasana an’io fomba io ka nahafahana namongotra ny aretina tazomoka tany amin’ny firenena marobe izay be moka anaty trano sy ahitana fifindran’ny aretina isaka ny tonontaona, tahaka ny eto anivon-tanin’i Madagasikara.”
Ny USAID no mitantana ny President’s Malaria Initiative, miaraka amin’ny fanampiana ara-teknikan’ny ivo toerana Center for Disease Control and Prevention (CDC), sy manohana asa fisorohana sy fitsaboana ny aretina tazomoka. Ny fandaharan’asa eto Madagasikara dia manampy amin’ny fanatsarana ny fikarakarana ny mararin’ny tazomoka, manampy amin’ny fisorohana ny aretina mandritra ny fitondran’ny vehivavy vohoka, ary manampy amin’ny fampiasana lay misy ody moka sy famendrahana ody moka ny ati-trano any amin’ny faritra voafidy. Mifanindran-dalana amin’ny asan’ny tetikady nasionaly iadiana amin’ny aretina tazomoka (na PNLP) izany rehetra izany.
“Fomba tena mahomby ary tsy misy ahiana ny famendraha ody moka,” hoy Ramatoa Hughes. “Manaja tanteraka ny tontolo iainana ny fanaovanay izany mba itandrovana ny endriky ny faritra sy ny loharanon-karena,” hoy izy.
Tafiditra ao amin’ny fandaharan’asa PMI ny fanaraha-maso ny tontolo iainana amin’ny fampiasana mahomby tsy misy tomika ny fanafody moka. Voahaja tanteraka ny fepetra voalazan’ny OMS amin’ny fanofanana eo amin’ny fampiasana ny fanafody moka, ny fikarakarana sy fampiasana toerana sahaza ho an’ny fitehirizana azy ireny, ny fampianarana hanasa tsara ny paompy, ny fanaovana lavaka hanariana ny rano avy nanasana ny paompy, ny fanariana ny faikam-panafody izay hopotehina rehefa tapitra ny hetsika.
Manan-danja ny fanampiana omen’ny USAID an’i Madagasikara na dia eo aza ny disadisa ara-politika, satria nahatratra 86 tapitrisa dolara izany tamin’ny 2010 ka nahasehaka ny fahasalamana sy ny fanjariana ara-tsakafo. Efa hatramin’ny taona 1984 no miasa eto Madagasikara ny USAID, ary ahitana ny fandaharan’asany avokoa ny 65%-n’ny faritra misy eto amin’ny firenena.